Repoblika Radikal: Fahefana Mahery Taorian'ny Ady An-trano
Iza ireo Repoblika Radika?
Ny Repoblika Radikaly no anarana nomena ny antoko-mpitendry malaza sy mahery tao amin'ny Kongresy Amerikana izay nanoloana ny fanandevozana ny andevo taloha sy nandritra ny ady an-trano , ary nanizingizina tamin'ny sazy henjana ho an'ny Atsimo taorian'ny ady , nandritra ny vanim-potoanan'ny fanavaozana .
Mpitarika fanta-daza avy amin'ny Repoblika Radikaly dia Thaddeus Stevens , mpandrindra iray avy ao Pennsylvania, ary Charles Sumner, loholona avy any Massachusetts.
Ny fandaharan'asan'ny Repoblika Radikaly nandritra ny ady an-trano dia nahitana ny fanoherana ny drafitr'i Abraham Lincoln ho an'ny South-South taorian'ny ady. Nieritreritra ny hevitr'i Lincoln fa somary mafampana ny hevitr'i Lincoln, nanohana ny Bill Wade-Davis ny Repoblika Radikaly, izay nandrisika ny fitsipika henjana mba hanaiky ny fanjakana hiverina ao amin'ny Union.
Taorian 'ny ady an-trano , sy ny famonoana an'i Lincoln , dia tezitra tamin' ny politikan 'ny filoha Andrew Johnson ny Repoblika Radikaly. Ny fanoherana an'i Johnson dia nanolotra ny votoatin'ny lalàna ho filoham-pirenena ary ny fandaminana ny didim-pitsarany.
Ny firafitry ny Repoblika Radika
Ny fitantanana ny Repoblika Radikaly dia noraisina avy amin'ny hetsika fanararaotana .
Thaddeus Stevens, mpitarika ny vondrona ao amin'ny Antenimiera, dia mpanohitra ny fanandevozina nandritra ny am-polo taona. Mpisolovava tany Pennsylvanie izy no niaro ny andevo. Nandritra ny Kongresy Amerikana dia lasa lehiben'ny tranon'ny Maodelin'ny Tetezamita sy ny Means izy ary afaka nampihatra ny fitondram-panjakana tamin'ny ady.
Stevens dia nanolotra ny Filoha Abraham Lincoln mba hanafaka ireo andevo. Ary koa izy nandrisika ny hevitra fa ireo fanjakana izay efa voavonjy dia, tamin'ny faran'ny ady, nandresy ny faritany, tsy manan-jo hiverina any amin'ny Firaisambe mandra-pihaonan'izy ireo fepetra sasany. Ny fepetra dia ny fananana zo mitovy amin'ny andevo nafahana ary manaporofo ny tsy fivadihana amin'ny Union.
Ny mpitarika ny Repoblika Radikaly tao amin'ny Antenimieran-doholona, ​​Charles Sumner avy any Massachusetts, dia mpisolo vava amin'ny fanandevozana. Raha ny marina, izy dia lasibatry ny fanafihana feno herisetra tao Capitol Etazonia tamin'ny taona 1856 rehefa nodarohan'i Congressman Preston Brooks avy any Caroline Carolina izy.
Ny volavolan-dalàna Wade-Davis
Tamin'ny faramparan'ny taona 1863 dia namoaka drafitra ny Filoha Lincoln mba "hamerenana" ny Atsimo taorian'ny ady efa niandry ny ady an-trano. Raha eo amin'ny drafitr'i Lincoln, raha ny 10 isan-jaton'ny mponina ao amin'ny fanjakana dia mianiana ny tsy fivadihana amin'ny Union, dia afaka mamorona governemanta vaovaon'ny governemanta izay heken'ny governemanta federaly.
Ireo Repoblika Radikaly tao amin'ny kaongresy dia tezitra tamin'ny zavatra heverin'izy ireo fa feno hatsaram-panahy sy famelan-keloka manoloana ireo fanjakana izay tamin'izany fotoana izany, niady tamin'ny Etazonia.
Nampiditra ny volavolan-dry zareo manokana, ny Bill Wade-Davis, izay nantsoina ho mpikambana roa ao amin'ny Kongresy. Ny volavolan-dalàna dia mitaky fa ny ankamaroan'ny olom-pirenena fotsy amin'ny fanjakana iray dia efa voatery mianiana ny tsy hivadika amin'i Etazonia alohan'ny hidirana any amin'ny fanjakana.
Taorian'ny nandanian'ny Kongresy ny volavolan-dalàna Wade-Davis, ny Filoha Lincoln, tamin'ny fahavaratry ny taona 1864, dia nandà tsy hanasonia izany ka hamela azy ho faty amin'ny veto-pocket.
Ny sasany tamin'ireo Kongresy Repoblikana dia namaly tamin'ny fanafihan'i Lincoln, ary nanery mihitsy aza fa ny Repoblikana hafa dia manohitra azy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny herintaona.
Raha nanao izany ny Repoblika Radikaly, dia nanjary lasa mahery fihetsika ary lasa lavitra ny faritra avaratra.
Nifandona tamin'ny filoha Andrew Johnson ny Repoblika Radikaly
Taorian'ny famonoana an'i Lincoln, hitan'ny Repoblika Radikaly fa mbola namela heloka an'i South Johnson ihany ny filoha vaovao Andrew Johnson . Araka ny efa nantenaina, Stevens, Sumner, ary ireo Repoblikana hafa nanan-kery tao amin'ny kaongresy dia nihantsy ady tamin'i Johnson.
Ny politikan'i Johnson dia tsy hita popoka amin'ny vahoaka, izay nitarika ho amin'ny fandresena tamin'ny Kongresy ho an'ny Repoblikana tamin'ny taona 1866. Ary ny Repoblika Radikaly dia nahatsapa fa afaka manova ny vetoo amin'i Johnson.
Ny ady nifanaovan'i Johnson sy ny Repoblikana tao amin'ny kaongresy dia nihaona tamin'ny lalàna samihafa. Tamin'ny taona 1867, ny Repoblika Radikaly dia nahavita nandika ny Lalàna Fanavaozana (izay navaozina tamin'ny Asa Fanarenana manaraka) sy ny Fanitsiana faha-14.
Ny Filoha Johnson dia voafetra tamin'ny alàlan'ny tranon'ny solontenam-panjakana saingy tsy voaheloka sy nesorina tao amin'ny birao izy taorian'ny fitsarana avy amin'ny Antenimieran'i Etazonia.
Ireo Repoblika Radika taorian'ny nahafatesan'i Thaddeus Stevens
Maty tamin'ny 11 Aogositra 1868 i Thaddeus Stevens . Rehefa nandry tao amin'ny fanjakana tao amin'ny rotunda tao amin'ny Capitol Amerikana izy, dia nalevina teo amin'ny fasana iray tany Pennsylvanie izay nofinidiny noho izy namela fandevenana ny fotsy sy ny mainty.
Ny fifidianana ny Kongresy nitarika azy no nitohy, na dia nihena aza ny hatezeran'ny Repoblika Radikaly raha tsy nisy ny firehetam-pandrenesana. Plus, nanampy ny filoham-pirenen'i Ulysses S. Grant izy ireo , izay nandray ny asany tamin'ny Martsa 1869.
Fomba hanampiana hampitsahatra ny tsy fananan'olona veterana
Boky fanentanana - Ny loko sy ny zavatra asehon'izy ireo
Fanomezana fanomezana ho an'ny mpampianatra
Ny History of New Year's Traditions
Fomba fianarana ho an'ny kilasy faha-11
5 Fihaonana manan-danja ao amin'ny tantara mampihetsi-po
Top Colleges ho an'ny vehivavy any Etazonia
Dr. Francis Townsend, mpikarakara ny tranom-panaovan-tena tranainy
Nahoana ny lanitra mena?
Ahoana no Hahatonga ny Snow Snow?
Inona ny Lalàna? Lalàna mifehy ny tantara amerikana
Saint Louis University GPA, SAT sy ACT Data
9-Fijerena horonan-tsarimihetsika ho an'ny PGA Tour
Josephine Baker: Fanoherana Frantsay sy ny Hetsika Havanana an'ny Fiaraha-monina
University Université de New Orleans Admissions
Inona ny Fahaizan'ny Mackinder Mackinder?
25 Tantaram-pianakaviana Fitiavana
Ranomasina faran'izay lehibe any Etazonia
Ny niandohan'ny Kabuki Theatre
Review: Michael Feinstein - The Project Sinatra, Vol. II: Ny fiainana tsara
Inona avy ny Libertarian anao?
Ohatra amin'ny Rhetoric
Roll ny Thunder, Henoy ny fitalahoako ny fivoaran'ny boky
Ny fiakaran'i Al Capone sy Lucky Luciano
Ny famaritana ny Halved (na Halve) amin'ny Gulf
Manamboatra Daty Access Access 2013
Vehivavy sy ny Ady Lehibe Faharoa: Vehivavy ao amin'ny Governemanta
Toro-hevitra momba ny fividianana ny lakile tsara indrindra anao
Famaritana sy fanazavana ny dingana atin'ny Exocytosis
Ny Wheel of Life